I-Eufy RoboVac G20 Hybrid yokuhlanza ngobuhlakani nangempumelelo [Buyekeza] | Amagajethi Ezindaba
UMiguel Hernandez | 15/03/2022 13:36 | General, Izibuyekezo
Eufy iyaqhubeka nokubheja ekhaya elixhunyiwe, elihlakaniphile futhi, ngaphezu kwakho konke, eliwusizo. Kulokhu, kufanele sikhulume ngalawo marobhothi amancane, ayindilinga adlala kumavidiyo amaningi ku-TikTok, imvamisa ngenxa yokungathandi okukhethekile aphathwa ngakho ngamanye amalungu omndeni, njengamakati.
Kulesi senzakalo sihlaziya ngokujulile i-Eufy RoboVac G20 Hybrid entsha, enye indlela emaphakathi nebanga edonsa kahle nokucushwa kalula. Zitholele nathi le nketho yokugcina yekhathalogi yokuhlanza exhunyiwe esinikezwa yi-Eufy futhi uma kufanelekile ngempela ukucabangela izimbangi zayo.
2 Isakhiwo sezakhi nezici zobuchwepheshe
3 Ukuhlanza kanye nokusebenza
Kulokhu u-Eufy akabhejwanga, akasungulanga, akazange alinge... Masikhulume iqiniso, kunzima ukubona i-robot vacuum cleaner edonsa amehlo akho, empeleni ziyafana futhi ngiyaqonda ukuthi ngenxa yokuthi ukwakheka kwayo kusebenza ngendlela yokuthi ukushintsha imilimitha elilodwa nje kungaletha izinkinga eziningi kunezixazululo. Kungenxa yalokho ngeke sicabangele ukuthi lesi sicoci se-robot vacuum sifana nezinye izigidi ezintathu ezitholakala emakethe futhi sizogxila ekuhlelweni kwehadiwe yayo kanye nekhwalithi yezinto zayo.
Uyithandile? Ithenge ngama-euro angama-299,99 kuphela e-Amazon!
Idivayisi ingamasentimitha angu-32 ububanzi futhi into emangalisa kakhulu ukuthi ingu-7,2 amasentimitha kuphela ubukhulu, futhi wukuthi u-Eufy usevele usixwayisa ngokuthi sibhekene nethuluzi elincanyana, into esiyiqinisekisayo. Ingxenye engenhla yenziwe ngengilazi, iheha izigxivizo zeminwe kodwa kulula kakhulu ukuyihlanza, into engikhethayo kune "jet black" evame ukugqokwa ngamanye amabhrendi futhi ukuqina kwayo kungadluli izinsuku ezimbalwa. Ngokuqondene nesisindo, asinazo izibalo eziqondile, futhi ngokucabangela ukuthi ngeke siyithwale ephaketheni lethu, angizange ngikubheke njengokubalulekile ukuyibeka esikalini, nakuba iso lebhakede elihle Ngingakutshela ukuthi kukhanya impela.
Isakhiwo sezakhi nezici zobuchwepheshe
Sine ilungiselelo elingokwesiko ngokwezinto zesisekelo esiphansi se-Eufy RoboVac G20 Hybrid, ngomshanelo ophakathi oxubile, onama-silicone nama-nylon bristles, ngokubona kwami ​​​​okusebenza kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezindawo. Iphelezelwa ngokushintshana amasondo amabili cushioned ukuze bakwazi ukunqoba izithiyo azungeze 3 amasentimitha, nesondo engapheli elihola idivayisi kanye ibhulashi ohlangothini olulodwa.
Okwangemuva Ithangi lokungcola lihlala, ithangi lamanzi, elizoxhunywa kuleli esishiwo ngenhla, kanye ne-mop enamathela nge-Velcro. Nokho, sinakho ukushintsha kwe-ON/OFF, into engakaze ibonwe kulolu hlobo lomkhiqizo muva nje futhi eyaziswa ngobuqotho, ikakhulukazi uma sihlela ukungawusebenzisi isikhathi eside, u-Eufy uveze kahle.
Ekugcineni, engxenyeni engenhla, njengoba sesishilo, sinesisekelo sengilazi epholile, inkinobho eyodwa yokumisa nokuphatha kanye nenkomba ye-LED yokuxhumana kwe-WiFi, akukho okuphawuleka kakhulu.
Esigabeni sezobuchwepheshe, sinakho Ukuxhumeka kwe-WiFi ukuvumelanisa i-RoboVac G20 Hybrid yethu nohlelo lokusebenza lwe-Eufy, olutholakala kukho kokubili iOS njengoba ku Android mahhala ngokuphelele. Siphinde sibe nenzwa ye-gyro yokuzulazula, kanye nochungechunge lwezinzwa ezigxile irobhothi elingawi ezindaweni eziphakeme ezihlukene. Okufanayo ngokwamandla okumunca, okuthi izozungeza phakathi kuka-1.500 no-2.500 Pa ngokwezidingo zethu, okutholiwe okungaphezulu namandla esiwabele ngohlelo lokusebenza.
Ukuhlanza kanye nokusebenza
Uma sesivumelanise irobhothi ngesicelo Eufy Home sizokwazi ukushintsha phakathi kwezindlela zokumunca ezine kanye nemodi "yokukhuhla". Le divayisi, naphezu kokungenalo uhlelo lokuzulazula nge-laser, isebenzisa isistimu ebizwa ngokuthi i-Smart Dynamic Navigation, okungukuthi, isebenzisa imigqa ehambisanayo esikhundleni sesistimu engahleliwe, eyivumela ukuthi inembe kakhudlwana futhi isebenze kahle ekuhlanzeni.
Sinohlelo lwe khuhla ngokusebenzisa i-mop emanzi, njengoba wazi kahle, ekhangayo ezitezi zokhuni nezepulatifomu, kodwa eshiya "izimpawu ezimanzi" ezitezi ze-ceramic.
Umsindo omkhulu ewukhiphayo ngu-55dB okuthile okuphawulekayo uma kucatshangelwa amandla ayo okumunca kanye nobukhulu bedivayisi, futhi ukuthi enye yezakhiwo zase-Eufy ifanele ukubheja irobhothi elithule elingabonwa. Okokugcina, kufanele sikhumbule ukuthi sizokwazi ukuvumelanisa nayo Alexa noma nini lapho sikwazile ukukumisa ngohlelo lokusebenza ngokushesha.
Izilawuli ezivela kuhlelo lokusebenza:
Ukuhlanza indawo (emibuthanweni)
Ngokuqondene ne ukuzimela, sizozulazula phakathi kwemizuzu eyi-120 esinikeza yona ngemodi ethule yokumunca okuncane, okulandelayo ngemizuzu engama-70 yokuhlanza kwimodi ejwayelekile futhi cishe imizuzu engama-35 uma siyibeka kumodi yokudonsa ephezulu.
Kuleli qophelo sibhekene nerobhothi elisebenziseka ngezindlela eziningi, eligqama kakhulu ngokuthula nokuminyene, elikude nokunye ukuzenzisa okulinganiselwe ekwenzeni imisebenzi yalo ngendlela engahlanyisi. Ukuzimela kwanele futhi amandla okumunca ayamangalisa, ikakhulukazi uma kucatshangelwa ubukhulu bedivayisi.
Uhlelo lokusebenza lunochungechunge lwemisebenzi ekhawulelwe ehambisana nezici zedivayisi. Impela siyahlangana ngibhekene nenye indlela emaphakathi nebanga lentengo eke yathengiswa eSpain ngama-euro angama-300, nakuba usungakwazi kakade ukukuthola ngokuqondile ku- teufy online esitolo. Nakulokhu kufanele sihlole ukuthi ingabe kufanelekile ukuthenga izisetshenziswa ngenani elifanayo elinikeza izici eziningi, noma ukubheja enkampanini eyaziwayo ukusebenza kwayo nokuqina kwayo okuqinisekisiwe. Ngaleso sikhathi ukuhlanza kwethu, ukumunca, ukuzimela kanye nomsindo ngale Eufy RoboVac Hybrid G20 kube kuhle.
I-RoboVac G20 Hybrid
Kuthunyelwe ku: I-15 March ka-2022
Ukulungiswa kokugcina: I-15 March ka-2022
Ithola ukungcola kalula
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-Eufy RoboVac G20 Hybrid yokuhlanza ngobuhlakani nangempumelelo [Buyekeza]
I-Tronsmart yethula i-Bang 60W, isipikha esiphathekayo esinonya samaqembu